उपत्यकामा ३२ प्रतिशतले लगाए कोरोनाविरुद्ध खोपको पूर्ण मात्रा
२०७८ असोज २२ शुक्रबार १८:१०:००
नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लक्ष्यअनुसार लगाइएको छ । असोज मसान्तमा कुल जनसंख्याको ३२ प्रतिशत जनसंख्यालाई लक्ष्यअनुसार नै खोप लगाइएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले देशभर पहिलो मात्रा ४० प्रतिशत र पूर्ण मात्रा ३२ प्रतिशतलाई लगाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिलो मात्रा ८७ लाख दुई हजार ७०५ र पूर्ण मात्रा ६९ लाख ६२ हजार १६४ जनालाई खोप लगाइएको छ । १८ वर्ष भन्दामाथिका दुई करोड १७ लाख ५६ हजार ७६३ जनालाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
यस्तै, उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा पहिलो मात्रा ८१ प्रतिशत र पूर्ण मात्रा ७४ प्रतिशतलाई लगाइएको छ । सहप्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार पहिलो मात्रा १७ लाख ४५ हजार ५७० जना र पूर्ण मात्रा १७ लाख ७९ हजार ८९७ जनालाई लगाइएको छ । उपत्यकामा १८ वर्षमाथिका २१ लाख २९ हजार ७७३ जना रहेका छन् । रासस
भारतमा पनि भेटियो ओमिक्रोन भेरियन्ट
विद्यालयमा कोरोनाको जोखिम
३१६ कोरोना संक्रमित थपिए, २५९ जना संक्रमणमुक्त
रुसद्वारा ओमिक्रोनविरुद्धको खोप बनाउन सुरु
कोरोनाको जोखिम कायमै रहेका वेला डा. बास्तोला टेकु अस्पतालबाट सरुवा
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कोरोना संक्रमण, एपिएफ अस्पताल भर्ना
बजार अनुगमनसहित महानगरले बनायो ६२ कानुन
कांग्रेस महाधिवेशन : सर्लाहीमा चौथोपटक निर्वाचन अधिकृत खटाइयो